भद्रगोल विकास योजना : मेट्रो रोक्ने गरी फ्लाइओभर ! – Sthaniya Patra
करिब ७ महिनामा प्रतिवेदन आएपछि कम्तिमा एउटा चोकमा काम थाल्नेगरी यथाशक्य चाँडो टेन्डरमा जाने बिभागको योजना छ । फ्लाइओभर बनाउने प्रक्रिया अघि बढेकै बेला रेल विभागले बुढानीलकण्ठ–महाराजगञ्ज–सातदोबाटो–गोदावरीखण्डको मेट्रो रेल र लगानी बोर्डले धुलिखेल–नागढुंगा रेलमार्गको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यही बेला काठमाडौं महानगरपालिका पनि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन डीपीआर बनाइरहेको छ ।
महानगरपालिकाले चक्रपथमा निर्माण गरेका फ्लाइओभरहरु सडक विस्तार गर्दा भत्काउनु परेजस्तै फेरी फ्लाइओभर बनाएर मोनो रेल बनाउँन भत्काउनपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य एउटा पूर्वाधारले अर्कोलाई पुर्याउने बाधाबारे पहिल्यै सोच्नुपर्ने बताउँछन् । बिना अन्तरनिकाय समन्वय काम गर्दा भविष्यमा अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाउनै नसकिने र सकेपनि लागत अति मँहगो पर्ने उनको भनाई छ ।
शहरका कुन सडकका कुन साइडमा कति मिटर मुनि ढल र खानेपानीका पाइप राखिएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित विकासे अड्डालाई नै थाहा छैन । टेलिफोन र बिजुलीका तार पनि त्यसरी नै सडकमा हालिँदैछ । सडकको सतहमुनि कुन युटिलिटी कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट नक्सा छैन । ढल मर्मत गर्दा खानेपानीको पाइप फुट्ने र खानेपानीको पाइप मर्मत गर्न सकड खन्दा टेलिकमको फाइबर काटिने समस्या छ ।
‘शहरी यातायात सञ्जालको आफ्नै विज्ञान छ, उनी भन्छन्, ‘अहिले फ्लाइओभर बनाउने भनिएका ठाउँहरुको ट्राफिक चाप लगायतका पक्षहरुको विज्ञान अध्ययन भएर आयोजना प्राथमिकीकरण गरिएको हो जस्तो लाग्दैन ।’
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिहवरी सापकोटा मेट्रो रेल फ्लाइओभर बन्ने क्षेत्रबाटै जाने अवस्था भए त्यसलाई हेर्न सकिने बताउँछन् । ‘हामीले यसमा विचार पुर्याएका थिएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अध्ययनकै चरण भएकाले यसमा छलफल चलाउन सकिन्छ ।’..Online khaber
रञ्‍जनको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकनमा लैजाने…